Company Profile Oo Dhaqanka Enterprise - Dongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.
Company Profile Oo Dhaqanka Enterprise
Balustrade & cuskado
Qaybta Birta Qaybinta & Qaybaha Birta Xaashida
Darbiga Birta Qaybiye
Qaybaha Isku Xidhka Muraayadda
Isku haynta Muraayadda
Dahaarka birta ahaanta leh iyo daadi
Qeybta birta ah ee birta ah
Aluminium & Xaashi Qaybo Bir ah
Aluminium Sheet Qaybo Bir ah
Qaybo Bir ah Xaashida Copper
Dongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.kaas oo ku takhasusay alaabada birta ah ee birta ah wuxuu ku yaalaa Aaga Warshadaha ee Songbaitang ee Magaalada Changping, Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong. Gaadiidku waa mid aad u habboon waxayna ku dhowdahay dekedda Shenzhen. Warshadeenu waxay daboolaysaa 25,000square mitir, Iyo warshad kale oo 30,000 mitir murabac ah ayaa dhisme ku socda. Warshaddeenu waxay ka kooban tahay aqoon isweydaarsiga makiinadaha, alaabada birta ah ee birta ah waxay isugu yimaadaan aqoon isweydaarsiga, aqoon isweydaarsiga birta, aqoon isweydaarsiga birta ah ee isku dhafka ah, iyo qaab dhismeedka birta aan caadiga ahayn isku uruurin.
Waxaan si gaar ah ugu dhex jirnaa birta birta ah ee birta ah & birta gacmeedka, shabaggeedii & qashin-qubka, kala-qeybiyaha derbiga birta oo tayo sare leh & birta xaashida ah, biraha birta ah ee biraha leh Waxaa jira gebi ahaanba lix taxane iyo kumanaan alaab ah. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan darajada 304 & 316 ee birta aan lahayn ee leh habab dhammaystiran oo kala duwan si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan ee macaamiisheenna. Ilaa hadda, alaabteenna waxaa loo iibiyay si aad u wanaagsan oo caan ku ah suuqa gudaha iyo dibaddaba, oo ay ku jiraan HongKong, Singapore, Australia, Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo Bariga Dhexe.
JKL waxay u hoggaansan tahay falsafadda ganacsiga ee "raadinta badbaadada tayo leh, horumarinta hal-abuurnimo, iyo abuuritaanka is waafajin adeegga". Waxaan ku guuleysanay cinwaanka iyo shahaadada "Alaabada Caanka ah ee Shiinaha", "Noocyada Caanka ah ee Shiinaha", "Wax soo saarka la doorbido ee Shiinaha ee Dhismaha Mashruuca", iyo "Wax soo saarka Tayada Qaranka ee Lagu Kalsoon Yahay" .Waxaan ku guuleysanay sumcad wanaagsan, saameyntiisuna waa kordhay maalin maalin. JKL hadda waxaa loo yaqaan "Khabiirka qalabka dhismaha ee birta ah ee Shiinaha ahama."
JKL waxay ka gudubtay nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001-2015, waxay ku guuleysatay magaca sumcadda caanka ah ee gobolka Guangdong. JKL waa hal xubin oo ka tirsan Ururka Qurxinta Dhismaha Guangzhou.
Waxaan xoogga saareynaa horumarinta dhaqankeena shirkadaha: inaan u adeegno macaamiisheenna isla markaana aan isla korno; inaan ixtiraamo alaab-qeybiyeyaashayada oo aan gaarno xaalad guuleysi leh; inaan si wanaagsan u daryeelno shaqaalaheena oo aan wax wadaagno. Adoo kobcinaya dhaqanka shirkadaha, waxsoosaarkayaga iyo iibkeenu maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii kordhayaa. Waxaan soo jiidanay khubaro badan oo ku soo biiraya shirkadeena, heerkeena maareyna waxay u socotaa internationalizaton.
Hadafkeena horumarka fog waa inaan noqono shirkada ugu caansan soo saarista qalabka Pearl River Delta oo tusaale fiican u noqono Qeybahayada! Iyada oo mabda'a ganacsiga la siinayo macaamiisha wax soo saarka ugu fiican iyo adeegga, si loo dhiso dhismeyaal ugub ah uguna horreeya.
Ku soo dhowow JKL oo waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqeyno. Aynu wada abuurno mustaqbal ifaya！
raadkeena, hogaaminta, hal-abuurka, alaabada
Shirka ahama Steel World & ...
Carwadii 119-aad ee Kanton Carwada JKL
Faahfaahinta ee ahama ahama t ...
Farqiga u dhexeeya Qalabka SS304 iyo SS316
Carwadii 118-aad ee Kanton ee qalabka JKL
Telefoonka: +86 0769-38807989
Cinwaanka: No.1 Tangdu Road, Songbotang, Changping, Dongguan, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Talooyin - Alaabada Kulul - Khariidadda bogga
Ahama cuskado, Cuskado, Qaybaha toosan ee gacanta, Qeybta jaranjarada jaranjarada, Dahaarka ahama Steel wiishka, Saxanka Saldhig gacmeed,